Ithemba kwiinkampani zangaphandle eSpain | Ezezimali
Las iinkampani zangaphandle ezisebenza eSpain ngoku zinethemba elingaphezulu kunelo zazinalo ngo-2012. Uphando olwenziwe yi IESE yeSikolo soShishino iqinisekisa ukuba ezi nkampani zilishumi kwezi zilishumi zilindele ukonyuka okanye ubuncinci ukugcina iinzuzo zazo kulo nakulo nyaka uzayo. Ngo-2012, isiqingatha salezi nkampani kuvavanywa kuzo sasicinga ukuba ingeniso yaso iza kwehla xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo.
Imozulu ye ishishini eSpainNgokophando olunye olwenziwe ngaphezulu kweenkampani zangaphandle ezingama-230 ezikweli lizwe, limi kumanqaku ayi-2,7 kwezi-5, ukuthintela imeko esezantsi ebifakwe kwilizwe kwiminyaka yakutshanje. Amanye amanani anika isizathu kubo bonke abatyali mali bamanye amazwe abathe bathetha ngamathemba oqoqosho alungileyo eSpain, ngakumbi echaphazela iziseko zophuhliso, umgangatho wobomi bawo, ubutyebi babantu kunye nobungakanani bemarike yayo.
Phakathi kweziseko ezithi zidunyiswe ngabatyali mali, ngokumangalisayo, ngumnatha woololiwe kunye neenqwelo moya. Umgangatho we Izikolo zeshishini zaseSpain, ulonwabo kunye nenkxaso yelizwe. Nangona kunjalo, abatyali mali kunye neenkampani zangaphandle bakholelwa ukuba iSpain kusafuneka iphucule inqanaba lesiNgesi kunye nezinye iilwimi, ukunciphisa iindleko zokuphila, kunye nokufumaneka kwabasebenzi abafanelekileyo.
Izinto ezingalunganga ngakumbi eSpain, njengezi nkampani zangaphandle, zezi iindleko eziphezulu zombane kunye nobunzima bezemali ziibhanki kunye neminye imibutho. Ngokuchanekileyo eli candelo lokugqibela lelona lifumana ukugxekwa kunye namanqaku asezantsi kwi-barometer yophando, nangona ukuphucuka okuncinci kuqatshelwe xa kuthelekiswa no-2012, unyaka apho amanani ayengalunganga kakhulu.
Abatyalomali bamanye amazwe bafuna ukuba eSpain kukho uzinzo olukhulu kwezopolitiko nakwezoqoqosho kunye nolawulo oluncinci. Ngokubhekisele kwimarike yezabasebenzi, eyona nto iphambili inento yokwenza nomthetho. I-70% yeenkampani zangaphandle zithathela ingqalelo ukuba uhlengahlengiso lwabasebenzi lwenze ukuba ukuthengisa kube bhetyebhetye, kwaye ama-60% anike imvume kubo nakwiziphumo zabo.
Kuya kufuneka kukhunjulwe ukuba utyalomali lwangaphandle luyaqhubeka nokuba yeyona nto iphambili eSpain. Ngo-2013 yafikelela kwizigidi ezili-15.800 zeerandi, ukonyuka nge-9% xa kuthelekiswa nonyaka ka-2012.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » ishishini » iinkampani » Iinkampani zamanye amazwe eSpain zinethemba loqoqosho lwelizwe
Gowex, isifundo esifundwayo kwaye ngexabiso elifanelekileyo
Ukungaqeshwa, ingxaki enkulu e-Itali